Unokufumana njani iiNkonzo eziDala zeNdalo yokuDala i-ID? - Make.id
Unokufumana njani iiNkonzo eziDala zeNdalo yokuDala i-ID?
yi-ID ID Oktobha 23, 2018
Kukho iinkampani ezininzi eziza kubakho zifuna ukunikezela ngeenkonzo zokudala amakhadi eziphezulu kunye nezingenakunyanzeliswa. Inyaniso kukuba ininzi yabo inika iinkonzo ezingenakunyuka. Oku kwenza kube nzima ukufumana inkampani eqonda into efunekayo ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zidibene. Ngaphandle kwekampani yokudalwa kwamakhadi e-ID ekuchanekileyo, awuyi kukwazi ukubaluleka kwemali yakho.
Injongo ephambili yale bhayiweyo kukukubonisa ezinye zeemfihlelo zokukhetha umenzi we-ID yomntu othembekileyo. Akungabazeki ukuba emva kokufumanisa ezi mfihlelo, uya kukwazi ukuqonda ukuba yintoni eyenza inkampani yokudala i-ID. Unamanyathelo ambalwa nje ekufumaneni ingubo yokudala ikhadi le-ID.
Ngexesha elizayo xa uceba ukuqesha iinkonzo zeenkampani ezikudaliweyo kwekhadi le-ID, qiniseka ukuba uye waqwalasela umgangatho wayo wobuchule. Kungenxa yokuba abaninzi babo abanamava okwaneleyo xa kuthelekiswa noko batshayo ukuba bakule ndawo. Inkampani eneenkcukacha ezinokuzibonela iza kunceda ukunceda ngokubanzi.
Ngokomzekelo, inokunika iingcebiso zeengcali ezixhomekeke kwiakhadi ze-ID ezenziwe ngaphambili. Iyakwazi ukongeza umnxeba othile kwiimpawu zakho ukuqinisekisa ukuba ikhadi lakho le-ID liphumeza injongo yalo xa lenziwe.
Into yokugqibela ofuna ukuba uyenze ukuqesha iinkonzo zenkampani ngokusekelwe kumabango ayo. Ezi zinto zingenakunyani ukuba ziyakwenza ntoni kunokulimala kunokulungileyo. Ufuna ukuqinisekiswa I-ID yomenzi oqonda indlela yokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Iingxelo ziya kusebenza njengeengcamango ezingabonakaliyo zabantu abamele ukuba basebenzise ezo nkonzo kwixesha elidlulileyo. Ungaze uwahoye ngenxa yeso sizathu njengoko unako ukubeka umngcipheko wokuphosa imali yakho enzima.
Zama ukubuza abantu kufuneka ukuba basebenzise ezo nkonzo kwixesha elidlulileyo. Ukutyelela kwiwebhusayithi yenkampani kwaye ubujonge. Ukuba awufumani naluphi na, cela inkampani ukuba ingaba unokunikezela ngezi ngongoma. Le nyathelo elinye ongenakulibalala xa uceba ukuqesha iinkonzo zomenzi wezazisi zelizwe.
Ixabiso kufuneka liqwalaselwe
Nangona ku soloko kunzima ukufumanisa uMenzi weeNkcukacha zoBume beeNkcukacha zikaRhulumente ezenza iinkonzo ezifikelelekayo, zininzi kuzo zonke indawo. Inkqubo kuphela ekufuneka uyenze apha izama ukufumana iinkampani ezininzi ngokunokwenzeka. Oku kwenzeka kakhulu xa usebenzisa i-intanethi.
Kukho konke ngokuthelekisa amanani ahlukeneyo ezi nkampani ezinikezela ngeenkonzo zabo zokudala amakhadi abo. Ezinye ziza kuba ziphantsi kakhulu kodwa ezinye zibiza. Ukuba unokwenza oku kakuhle, akungabazeki ukuba uya kukwazi ukufumana inkampani eya kufumana ibhajethi yakho ngokugqibeleleyo.
Ngokusekelwe kwiingcebiso ezabelwana ngasentla, akukho nto engayikwaziyo ukuba uyifumane kalula inkampani ephezulu ensimini Ikhadi lesaziso indalo. Kuphela kufuneka usebenzise la macebiso xa kuyimfuneko ukufumana ixabiso elifanelekileyo lemali esetshenzisiweyo.